अग्निहोत्र कसरी गर्ने?
अग्निहोत्र प्राचीन वेद-पुराणमा वर्णित एउटा साधारण धार्मिक संस्कार हो, जुन प्रदूषणलाई अल्प गर्न तथा वायुमण्डललाई आध्यात्मिक रुपले शुद्ध बनाउनको लागि गरिन्छ । अग्निहोत्रको सन्दर्भमा SSRF द्वारा गरिएको आध्यात्मिक अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा अधिक जानकारीको लागि अग्निहोत्र संस्कारमा आध्यात्मिक अनुसन्धान पढ्नुहोस् ।
२. अग्निहोत्रको मन्त्र
२.१ सूर्योदयको समय
२.२ सूर्यास्तको समय
३. अग्नि प्रज्वलित गर्ने
३.१ अग्निहोत्रको लागि आवश्यक सामग्री
३.२ सामग्रीहरुलाई राख्ने
४. आहुति दिने
४.१ प्रात: कालीन अग्निहोत्र
४.२ साँझको अग्निहोत्र
५. अन्य तैयारी
६.अग्निहोत्र गर्ने चरणहरु (स्लाईड शो)
७. काहाँ गर्ने
८. अग्निहोत्र कसले गर्न सक्छ
९. शरणागत भावको जागृति
१०. अग्निहोत्र गर्ने समय निर्मित ईश्वरीय तरङ्गको सूक्ष्म-ज्ञान मा आधारित चित्र ।
ठीक स्थानीय सूर्योदय तथा सूर्यास्तको समय, गाईको घीउको केहि थोपामा मोलिएको चामल (अक्षत) अग्निमा हालिन्छ । तामाको अर्ध पिरामिड भएको भाँडामा अग्नि प्रज्वलित गरिन्छ । अग्निमा दुईपटक आहुति दिने समय दुई सरल वेद मन्त्रको उच्चारण गरिन्छ ।
अग्निहोत्रको सामग्रीलाई अग्निमा अगाडी दिएको मन्त्रोंच्चारणको साथ आहुति दिनुपर्छ ।
१. सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम् न मम
२. प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम् न मम
> सूर्योदयको समय उच्चारण गर्ने अग्निहोत्रको मन्त्र सुन्नुहोस् ।
१. अग्नये स्वाहा अग्नये इदम् न मम
> सूर्यास्तको समय उच्चारण गर्ने अग्निहोत्रको मन्त्र सुन्नुहोस् ।
मन्त्रको उच्चारणले व्यक्तिको मनमा शरणागत भाव निर्मिति तथा जागृति गर्नमा सहायता हुन्छ । मन्त्रको उच्चारण यस्तो प्रकारले गर्नुहोस् कि पुरै घरमा सुनियोस् । उच्चारण स्पष्ट तथा लयमा हुनुपर्छ । मन्त्रमा आएका शब्दहरु सूर्य, अग्नि तथा प्रजापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पर्यायवाची हुन् । शरणागत भावको जागृति यो मन्त्रको उच्चारणबाट हुन्छ ।
२ चुटकी अखण्ड अक्षत (चामल)
निश्चित आकारको अर्ध पिरामिडको तामाको भाँडो
आगोको स्रोत (सलाई)
[धेरैजसो सामग्री अग्निहोत्र सामग्री राख्ने विशेष पसल अथवा अनलाइन स्टोरबाट पाउन सकिन्छ । यो इन्टरनेटबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।]
स्थानीय सूर्योदय तथा सूर्यास्तको समय हेर्नुहोस् (यो अनलाइन बाट पनि http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html थाहा पाउन सकिन्छ ।) त्यसपछि सूर्योदय तथा सूर्यास्तको समयको ५-१० मिनट पहिला, अग्निहोत्रको भाँडोमा सुक्खा गोबरको टुक्राहरू यसप्रकार राख्नुहोस्:
सर्वप्रथम, गोबरको सानो टुक्रा लिनुहोस् र त्यसलाई हवनपात्रको तललो भागमा राख्नुहोस्, त्यो टुक्राको आकार यस्तो होस् कि त्यो तललो भागमा राम्रो संग रहोस् ।
हवनपात्रको अगाडि तथा पछडिको भागमा दुईवटा सानो टुक्रा राख्नुहोस् ।
यी दुई टुक्राहरु माथि लामो दुई टुक्राहरु ठाडो रूपमा सँगसँगै भाँडाको बायाँ र दायाँपट्टि मिलाएर राख्नुहोस्; यस प्रकार राख्नुहोस् कि बीचमा केहि खाली ठाउँ होस् ।
१ अथवा २ तहहरु यसरीनै बनाउनुहोस्, २ टुक्राहरु तेर्सो र अर्को २ टुक्राहरुलार्इ ठाडो गरेर राख्नुहोस् । यसो गर्नाले भाँडाको बीचमा खाली ठाउँ सिर्जना हुन्छ ।
गोबरको एउटा टुक्रा लिएर त्यसमा घीउ लगाउनुहोस् । यो टुक्रालार्इ घीउको दिया माथि राखेर जलाउनुहोस् र हवनपात्रमा राखेको गोबरको मध्यमा राख्नुहोस् । आवश्यकता परेमा यसमा लेहबान (myrrh), कपूर अथवा घीउमा भिजेको कपासको बत्तीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अग्नि प्रज्वलित गर्ने समयमा घीउको केहि थोपाहरु गोबर माथि हाल्न सक्छौं । आवश्यक परेमा, गोबरको टुक्राहरुलाई जलाउनको लागि हाते पंखाको उपयोग गर्न सकिन्छ । अग्निलाई कहिले पनि मुखले नफुक्नुहोस् । अग्निहोत्रको समय अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित हुनुपर्छ ।
दुई चुटकी सफा, नटुक्रिएको चामल लिनुहोस् र त्यसमा एक थोपा घीउ हाल्नुहोस्, र आफ्नो बायाँ हातमा अथवा एउटा सानो पात्रमा लिनुहोस् ।
आफ्नो आखाँ घडीको काटामा राख्नुहोस्, जब घडीको काटाले सूर्योदयको समय छुन्छ, पहिलो मन्त्र भन्न प्रारम्भ गर्नुहोस् “सूर्याय स्वाहा” ।
स्वाहा भन्ने बित्तिकै चामलको पहिलो भाग अग्निमा आहुति दिनुहोस् र सूर्याय इदं न ममको उच्चारण गर्दै मन्त्रको प्रथम पंक्तिलाई पूर्ण गर्नुहोस् । अक्षत दाहिने हातको बूढी औंला, माझी औंला र साहिली औंलाले (हत्केला माथितर्फ फर्काएर) अग्निमा आहुति दिनुहोस् तथा बायाँ हात आफ्नो छातीमा राख्नुहोस् ।
मन्त्रको दोस्रो पंक्तिको उच्चारण गर्दै चामलको दोस्रो भाग “प्रजापतये स्वाहा” भनेपछि अग्निमा आहुति दिनुहोस् तथा मन्त्रलाई “प्रजापतये इदं न मम” भन्दै पूर्ण गर्नुस् ।
जबसम्म हवन सामग्री पूर्णतः जल्दैन, बसेर अग्निमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । बिहानी पखको अग्निहोत्र यही समाप्त हुन्छ ।
साँझको अग्निहोत्रको समय भन्दा पूर्व, बिहानको अग्निहोत्रको खरानीलाई हवनपात्रबाट निकालेर ध्यानपूर्वक अर्कै भाडामा राख्नुहोस्, जुन खरानी संकलित गर्नको लागि छुटाएको हुन्छ ।
बिहानको समयको प्रक्रियालाई दोहोर्याउनुहोस्, फेरि हवनपात्रमा गोबरको टुक्राहरु राखेर अग्नि प्रज्वलित गर्नुहोस् । साथमा घीउले मोलेको चमालको दुई बराबर भागहरूमा दुईपटक आहुति दिनको लागि तयार गर्नुहोस् ।
ठीक सूर्यास्तको समय अग्निहोत्रको सूर्यास्तको मन्त्र “अग्नाय स्वाहा” भन्ने बितिकै चामलको पहिलो भाग अग्निलाई आहुति दिनुहोस् र “अग्नाय इदं न मम” को उच्चारण गर्दै मन्त्रको प्रथम पंक्तिलाई पूर्ण गर्नुहोस् ।
त्यसै गरि मन्त्रको दोस्रो पंक्तिको उच्चारण गर्दै चामलको दोस्रो भाग “प्रजापतये स्वाहा” भन्ने बितिकै अग्निमा आहुति दिनुहोस् तथा मन्त्रलाई “प्रजापतये इदं न मम” भन्दै पूर्ण गर्नुहोस् ।
जब सम्म हवनसामग्री पूर्णतः जल्दैन, बसेर अग्निमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । साँझको अग्निहोत्र यहीं समाप्त हुन्छ ।
अग्निहोत्रको स्थान स्वच्छ तथा व्यवस्थित राख्नुहोस् ।
बिहानको समयमा अग्निहोत्रको` समय भन्दा पूर्व स्नान गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ । संध्याकालमा स्नान गर्न सम्भव छैन भने अग्निहोत्र गर्नु भन्दा अगाडी हात, खुट्टा तथा मुख धुनुहोस् ।
अग्निहोत्रको विभूति (भस्म) छुट्टै भाडामा संकलित गर्न सकिन्छ । यसमा औषधीय गुणहरु हुन्छ (सन्दर्भ : www.homatherapy.de/linked/buch_eng.pdf) तथा यसको उपयोग बगैंचा तथा कृषिको लागि प्रभावकारी तथा अत्यन्त उपयोगी मलको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यो विभूतिलाई व्यर्थ सम्झेएर फोहोर फाल्ने भाँडामा नफाल्नुहोस्, खरानीहलाई फोहरको रुपमा व्यवहार नगर्नुहोस् । अग्निहोत्रको खरानीलाई ताल, नदी अथवा पानीको भण्डार भएको स्थानमा प्रवाहित गर्न सक्नुहुन्छ । यसले पनीलाई सूक्ष्म-स्तरमा स्वच्छ तथा शुद्ध गर्दछ ।
अगाडी दिएको स्लाईड शोमा अग्निहोत्र कसरी गर्ने यो सबै चरणहरु देखाएको छन् ।
अग्निहोत्र घरको कुनै पनि कोठा अथवा ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यदि घरमा पूजाघर अथवा ध्यान-कोठा भएमा त्यहाँ अग्निहोत्र गर्ने सर्वोत्तम हुन्छ । तपाईको घरको कौसी, छत, बार्दली, घरसॅंगैको खेत अथवा बगैचामा पनि गर्न सकिन्छ ।
अग्निहोत्रको संस्कार सरल, सजिलै ग्रहण गर्नको लागि योग्य तथा सर्वगत छ । यसलाई जसले पनि गर्न सक्छ । संसारमा, अनेक व्यक्ति तथा परिवारले अग्निहोत्र गरेर लाभान्वित भइरहेका छन् । यसमा धर्म, सम्प्रदाय, जाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग तथा आयुको कुनै बन्धन हुँदैन । बच्चाहरुले पनि ठुलोको मार्गदर्शनमा यसलाई गर्ने सक्छन् । स्त्रिहरु आफ्नो मासिक धर्मको समयमा नगर्नुहोला ।
यदि अग्निहोत्र, आणविक विकिरण बिरुद्ध सुरक्षाको लागि सक्रिय साधनको रूपमा गरिने हो भने SSRF को सुझाव छ कि यो कार्यको लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत आध्यात्मिक स्तर भएको व्यक्तिले गर्नुहोस् । [आणविक उत्सर्जनबाट सुरक्षा हेतु अग्निहोत्रको प्रभावक्षमतालाई बढाउनमा आध्यात्मिक स्तरको महत्वको सन्दर्भमा अधिक जानकारीको लागि कृपया हाम्रो लेख आणविक विकिरणबाट सुरक्षाको लागि अग्निहोत्र पढनुहोस्]
अग्निहोत्र गर्ने समय एउटा व्यक्तिले मात्र हवन गर्नुहोस् । अग्निहोत्रको समयमा उपस्थित परिवारको अन्य सदस्यहरुले पनि लाभ ग्रहण गर्नेछन् ।
दायाँ हातले चामल अर्पण गर्ने समय, देब्रे हात छातीमा राखेको हुनु पर्छ किनकि यसले शरणागति भाव जागृत हुन मदत गर्दछ ।
अग्निमा अर्पित गरिसकेपछि, शान्तिसँग दैवी शक्तिमाथि ध्यान एकाग्र गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । यो समयमा मनको सबै विचारहरु त्याग्ने प्रयास गर्नुहोस् तथा पूर्ण शरणागत भावलाई जागृत गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
अग्निहोत्र पछि आगो स्वयं कम हुन दिनुहोस् । त्यसलाई निभाउनको लागि अन्य केहि प्रयास नगर्नुहोस् । गोबरको सबै टुक्राहरुलाई पूर्णतः जल्नदिनु सर्वोत्तम हुन्छ । यदि पूरा जलेन भने त्यसलाई विभूतिको रूपमा लिनुहोस् (पनीमा विसर्जन गर्नुहोस्) र अर्कोपटको लागि नयाँ गोबरको टुक्रा प्रयोग गर्नुहोस् ।
सूक्ष्म-ज्ञान मा आधारित चित्र बुझ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
१ आध्यात्मिक भावनाको वलय निर्माण हुने
२ परमेश्वरीय तत्व आकर्षण हुने
२ अ परमेश्वरीय तत्वको एउटा चक्र निर्माण हुने
३ चैतन्य आकर्षण हुने
३ अ चैतन्यको वलय नर्मिति
३ आ वायुको रूपमा चैतन्य प्रक्षेपण हुने
३ इ व्यक्तितर्फ चैतन्य प्रक्षेपण तथा चक्रको निर्मिति हुने
४ आहुतिपछि सूर्य तत्व आकृष्ट हुने
४ अ सूर्य-प्रधान तत्वको चक्र निर्माण हुने
५ तेज-प्रधान तत्वको प्रवाह आकृष्ट हुने
५ अ तेज-प्रधान तत्वको चक्र निर्माण हुने
५ आ तेज-प्रधान तत्वको चक्र उत्सर्जन हुने
६ मन्त्र-शक्तिको उत्सर्जन हुने
७ शक्तिको प्रसारण हुने
८ तेज-तत्वको उत्सर्जन हुने
८ अ तेज तत्वको चक्र निर्मित हुने
९ चैतन्यको रूपमाईश्वरीय शक्तिको कणहरुको प्रसारण हुने
१० कुण्डलिनी चक्रहरु शुद्ध हुने
११ प्राण-शक्ति कणहरुको प्रसारण हुने
११ अ प्राण-शक्ति ग्रहण गर्ने
१२ ईश्वरीय शक्ति कणहरुको प्रसारण हुने
१३ शरीरको सबैतर्प सुरक्षाकवच निर्मिति हुने